Mwaka wechipiri weThe Morning Show munaGunyana | Ndinobva mac
Mwaka wechipiri weThe Morning Show munaGunyana
Unogona kutaura kuti The Morning Show ndeimwe yeakanakisa akateedzana ayo Apple TV + parizvino. Imwe yeakanyanya kufarirwa nevatsoropodzi neruzhinji Mubairo unokunda uye wakabudirira kuona, mwaka wechipiri unotove uine zuva rekuburitsa. Kunyangwe zvipingaidzo zvakaitika nekuda kwedenda, pamusoro pezvose, isu tatova nezuva rekuburitsa. Iyo inotevera Gunyana 17 ichatanga paApple TV + iyo mwaka wechipiri yezvakaitika zvechirongwa chenhau chine nharo zvakanyanya.
Mutambo-unohwina mupepeti wedhirama "Iyo Yemangwanani Show" inogadzirira kudzoka kwayo kuApple TV + ine vhidhiyo nyowani yemaminetsi maviri ekusimudzira. Svondo 17, iyo Emmy Mubairo-anokunda akateedzana anodzokera kune diki skrini kune mwaka wayo wechipiri. Vhidhiyo yekusimudzira iyo yakaiswa paTwitter neYouTube inopa vateveri venhevedzano zano reizvo zvichauya mumashure megore rino.
Pane akati wandei kutora mafirimu akateedzana kwakamiswa nekuda kwe COVID uye hutachiona hwayo munhengo dzekutora mifananidzo. Muna Zvita zvakatangazve zvakare uye zvinoita sekunge yakagadzirira kusunungurwa. Tichaenderera mberi nekuona zviitiko zvevanyori vanonyanya kudiwa asi panguva imwechete yakashoropodza chirongwa chenhau munyika yeterevhizheni yekunyepedzera. Nyaya dzinodiwa kwazvo sezvatakataura kune chikamu chevatsoropodzi neruzhinji.
Mwaka uno wechipiri, The Morning Show vashandi vanopora kubva mukuparadzwa kunokonzerwa nezviito zvaAlex (Jennifer Aniston) naBradley (Witherspoon). Iwo akateedzana anokanganisa kuenderera shanduko kunoitika mupasi, kupi kuzivikanwa kuri zvese uye musiyano uripo pakati pemabatiro atinozviita pachedu uye zvatiri chaizvo unotora chinhanho chakakosha.
Isa zuva iro pane ako ajenda. Gunyana, 17, kuratidzwa kwepasirese kwemwaka wechipiri weiyo The Morining Show une chokwadi kuti uri kutsvaga wechipiri Emmy.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Mwaka wechipiri weThe Morning Show munaGunyana
Chiziviso pane Apple Music chiteshi "Beyond Stereo"
Apple inodhinda mavhidhiyo mashanu muchidimbu mazuva mashanu emisangano yeWWDC